Mbola nandroba omby tao Andaro Kaominina Isoanala ireo dahalo ny 13 febroary. Nanao hazalambo ireo dahalo ny Zandary. Nisy ny fifandonana tao Manitsirano Kaominina Isoanala omaly. Tafaverina ny omby 09. Dahalo roa maty, iray azo sambobelona voatifitra teo amin’ny tongony. Hita tany amn’izy ireo ny akanjo sy findain’ireo mpandeha.
Misy olomboafidy ahiahiana ao ambadik’ity asan-dahalo sy fanakanan-dalana mpiseho manodidina ny Kaominina Isoanala ity. Manao fanadihadiana mikasika izany ny Zandarimaria ankehitriny.
Noraisina ny fepetra fa hisy Zandary manaraka ireo fiara mizotra amin’iny RN13 iny, indrindra ny amin’ny alina.